ဆန်ပြုတ် – Everybody Read TChen
တခါလာလဲ အသားဆီပျံ တခါလာလဲ ကုန်းဘောင် ဆီတဝင်းဝင်း တခါလာလဲ ကြက်သားမှို တခါလာလဲ ဘာသား ညာသား တော်ပါပြီ အရပ်ကတို့ရေ အီပြီတော့ အီပြီ လို့ သာ ကိုဖေ့ လို လမ်းဆုံကနေ မန်းတုန်အောင် ကုန်းအော်လိုက်ချင်တော့တယ် သွားကျိုး အဆိုတော်ကတော့ လမ်းဆုံမှာ….ဘာဘာ ညာညာ ဆိုပြီး သီချင်း ဆိုလေမလား………..ကိုယ်ကတော့ တကယ်ပြောတာပါ တခါတခါ အသားတွေကို တကယ် အီ ပြီး စိတ်ကုန်လာပြီ………တသက်တာပတ်လုံး သက်သတ်လွတ်ပလိုက်ရရင် ကောင်းမလားလို့တောင်မှ တခါတခါ တွေးမိတယ် တကယ် အဟုတ် ဘုရားစူး မိုးနတ်မင်းကြီး အသိ…….
သုို့သော် လည်း အခါများစွာတွေမှာတော့ ဝက်တကောင် က အွိုင့် အွိုင့် တို့ ကြက်တကောင်ကောင် က ကတော်ကတော်တို့ လာလုပ်ရင် အသံ ကိုတောင် ပြေးကိုက်ချင်မိပြန်ရော်…….အဟိ
ထားပါလေ ခုတော့ တခါ ပုံဆန်းကလေး နဲ့ အများကြည်အောင် တင်ဆက်အုံးမှာက ရွာစားရေ………
ဆန်ပြုတ် အငံပါတဲ့တော့…………. ဂလိ ဂလိ ပလို့ဂျိ………
မောင်ကတော့ ဆန်ပြုတ် ဆို ဘယ်လိုပြုတ်ပြုတ် မကြိုက်ပါဘူး ကိုယ်ကတော့ သူနဲ့ ပြောင်းပြန် ဆန်ပြုတ် ဆို ဘယ်လိုပြုတ်ပြုတ် ကြိုက်တယ် ကဲ ဘယ်နှယ့်လဲ အသွင်မတူ အိမ်သူမဖြစ်ဆို ပြောကြစမ်းပါအုံး ဥာဏ်များတဲ့ ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ …………
“ဟဲ့ ခင်မိမိချမ်း ငတို့က အသွင်မတူ အိမ်သူမဖြစ်လို့ပြောတာ လေ ညည်း အိမ်သားဖြစ်နေတာများ”
(သိပါတယ် အရီးလေးမြ အသံကြီးများ…..)
ကဲပါလေ ရယ်စရာမရေးတာကြာလို့ ရေးလိုက်ပါတယ် စိတ်လဲကြည်နေတာနဲ့ ….
ချက်ရပြုတ်ရတာ သိပ်လွယ်တယ် စားရတာလဲ လွယ်တယ် တီက ကြိုက်လဲ ကြိုက်တော့ ခဏခဏ ချက်စားပါတယ် နေမကောင်းမှ စားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ သွားရည်စာ လိုမျိုးပါ တအိုး အကြီးကြီး လဲ ချက်ထားပြီး တယောက်ထဲ တစွပ်စွပ် စားနေတတ်တာပဲ ပန်းကန်ကြီး နဲ့ ထည့် အစာပလာတွေ ထည့်ပြီး ဇွန်းတပ်ပြီး တီဗီရှေ့ ဒါမှမဟုတ် ဝတ္ထု တအုပ်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် စားတော့တာပဲ တဇွန်းခပ်စားလိုက် စာရွက် လှန်လိုက်ပေါ့……ကဲ ခြေဆင်းတွေ ကို ဒီမှာတင်ရပ်လို့
ဆန်ပြုတ်ဆိုတဲ့ အတိုင်း ပထမဆုံး ဆန်တွေ ကိုရေဆေး လိုသလောက် အိုးလေးထဲထည့်ပြီး ရေ အသင့်အတင့် နဲ့ဆန်လုံး ကွဲပြီး နည်းနည်း စေးလာတဲ့ အထိပြုတ်ထားပေးပါ
ပထမပုံကတော့ ပုစွန်ခြောက် အကောင်သေးသေးလေးတွေ ကို ရေနွေးနဲ့ ဆေးပြီး ပြန် စစ်ထားတာပါ ဘေးပုံ က ဝက်သား ကို လိုသလောက် အနေတော် လေးတွေ ပါးပါးလှီး ပြီးတော့ ငရုတ်ကောင်း နဲ့ ပဲငံပြာရည် နယ်ထားပါ (ဒီနေရာမှာ ဆား နဲ့အချိုမှုန့် မထည့်ပါနဲ့ အုံး ခဏနေ အိုးကြီး ထဲ ကို ထည့်အုံးမှာ ဆိုတော့ များနေမှာစိုးလို့ပါ) ပြီးရင် ခဏ နှပ်ထားပါ။ ဝက်ကို လှီးချွတ်နယ်ဖပ် နှပ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ ဆန်လုံးလေးတွေ ကွဲစပြုလာရင်ပုစွန်ခြောက်ကောင်လေးတွေ ကို ထည့်လိုက်ပါ
မှိုခြောက် ကို ရေနွေးစိမ်ပါ ပြီးတော့ ပါးပါးလှီး ပြီးတော့ ဆီလေးနဲ့လှိမ့် ပေးပါ ဘာမှထည့်စရာမလိုပါဘူး မွှေးအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ပဲပြားရှိရင်တော့ လဲ အတုံးသေးသေးလေးတွေလှီးပြီး ကြော်ထား ပေးပါ တီကတော့ ပဲပြား ကို မကြိုက်လို့ တမင်ကိုမထည့်တာပါ
ကြက်ဥလေး ၄ ၅ လုံးလောက်ကို ငရုတ်ကောင်းလေးနဲ့ ဆား အချိုမှုန့် အနည်းငယ် ထည့် ခလောက်ပြီး မကပ်တဲ့ အိုးမှာ ဆီပါလေရုံနဲ့ ပါးပါးအချပ်လေးတွေ (ရေမုန့်နီးပါ) ရအောင် ကြော်ပါ ပထမ ပန်းကန်ထဲမှာ ကြည့်ပါ အဲ့တာ ကြက်ဥ အပါးကြော် ၇ ချပ် ကိုထပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ကော်ပြန့် လိပ်သလို လိပ်ပြီး အချောင်းလေးတွေ ရအောင်လှီးပါ ဒုတိယ ပန်းကန် မှာ ကြည့်ပါနော်
ဒီအချိန်ဆို ဆန်လုံးလဲ တော်တော်ကွဲလို့ ဆန်ပြုတ်က စေးစပြုနေပါပြီ ခုန က ပုစွန်ခြောက် ထည့်ထားလို့အနံလေးကော ငံတန်တန် အရသာလေးပါ ရစပြုနေပြီဖြစ်တဲ့ ဆန်ပြုတ်ထဲကို ဆီနဲ့လှိမ့်ထားတဲ့ မှိုကြော်လေးထည့်ပါ ပြီးရင် ဝက်သား နယ်နှပ် ကို ထည့်ပါ ကြက်ဥ ကြော် ကိုထည့်ပါ ပြီးရင် သမ မျှတ အောင် ယောက်ဇွန်းအကြီး စားနဲ့ မွှေပေးပါ အကုန် မျှ ပြီဆိုရင် ဆား အချိုမှုန့် ခပ်ပြီး အရသာ ချို ပေါ့ ငံ မြည်းပါ လိုတိုး ပို ရေ နည်းနည်း ရောပါ ဒါက ရေးနေကျ စကား အဖြစ်ရေးတာနော် ရေရောစရာ မလိုအောင် အစကတည်းက နည်းနည်းချင်းစီ မှန်းထည့်ပေါ့ တီက ဦးကြီးပု မဟုတ်တော့ လက်မှန်းနဲ့ ပဲ ရမ်းပစ်ပါတယ် “ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားကတွပ်ပီပေါ့…”
ကြိုက်တတ်ရင် တရုတ်နံနံလေးတွေလက်တစစ် အရွယ်လောက် ဖြတ်ပြီး ထည့်လိုက်ပါအုံး မွှေးတာပေါ့ တီကတော့ မကြိုက်လို့ မထည့်……
ပြီရင်တော့ ခဏပေးဆူပြီး ရင် စ စားလို့ ရပါပြီ တီစားတဲ့ပုံကိုကြည့်ပါ တီက ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပန်းကန်ထဲ ကို စားချင်သလောက် အရင်ထည့်ပါတယ် ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက် နည်းနည် ဆမ်းပါတယ် ပဲငံပြာရည် ကို တချက်နှစ်ချက် ပုလင်း စောင်းပြီး ထည့်ပါတယ် ငရုတ်သီး ဆီချက် ထည့်ပါတယ် သံပရာသီး ညှစ် လိုက်ပါတယ် ပြီးရင် ဇွန်းနဲ့ သေချာ မွှေ လိုက်ရင် စားဖို့ အသင့်ဖြစ်ပါပြီ
နံနံပင် ကြိုက်တတ်ရင် ထည့်စားပါအုံးနော် တီကတော့ လောလောဆယ် မရှိလို့ပါ ထည့်ရတာ နံနံပင်တော့ ကြိုက်ပါတယ်
အရေးကြီးတာ တချက် ပြောပါမယ် သေချာမှတ်ပါ ဒီလို ချက်တဲ့ ဆန်ပြုတ် ကို ခပ်တဲ့နေရာမှာ ဇွန်းနဲ့ အကြီးအကျယ် မမွှေပါနဲ့ ဆန်ပြုတ်က ရေထွက်တတ်ပါတယ် သာသာလေး ကိုယ်စားချင်သလောက်ကို သာ ခပ်ပြီး ပန်းကန်ထဲထည့် တွယ်ပါ အဲ့တာမှ ထားလို့ ကောင်းပါတယ် ခဏခဏ ပြန်ပြန်နွေးရင်လဲ ဆန်ပြုတ်ကနေ ဆန်ပြဲ ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ် သတိမှတ်စရာ အချက်တွေပါပဲ…..
အချိုတည်းဖို့ ကတော့ ယုိုးဒယား အိုတော့ပ် သရက်ပြင်နဲ့ ကူမင်း မရွေးပါ
(ပုကောက်လန်ဆိုတာ တရုတ်လို ကြော်ငြာ သင်ပုန်းပါ)
မနက်ဖြန် ဟာ ဒီအပတ်ရဲ့ နောက်ဆုံး ရုံးတက်နေ့ပါ နောက်အပတ်မှာ တနင်္လာ အင်္ဂါ ပိတ်ပါတယ် တီက ဗုဒ္ဓဟူး ကနေ သောကြာ အထိ ခွင့်ယူထားပါတယ် အမေ နဲ့ မောင်နဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့ အတူ ဖူးကက်သွားပါမယ် စာရေးကျဲပါမယ် ခုနောက်ပိုင်း တနေ့ကို ၅၀၀ ဝန်းကျင် တခါတခါ ကျော် ဝင်နေတော့ ကြားထဲ စားရေး ပြတ်သွားရင် ပျောက်ကုန်မှာ စိုးလို့ ကြိုတင် ကြေငြာ ထားတာပါ စကက်ဂျူး နဲ့တော့ တင်သွားနိုင်အောင် ကြိုးစားပါမယ် မသေချာပါ ဟောင်းရှော လို့ မေးခဲ့တဲ့ တီချမ်း နတ်သင်းရှော ဖြစ်နေပါတယ်
Posted on May 11, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆန်ပြုတ်, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း7 Comments on ကြက်ဥ ဆန်ပြုတ်ငံ
တီချမ်းနေမကောင်းပါ။ လည်ချောင်းတွေနာနေပါတယ် ချောင်းလဲနည်းနည်ဆိုးပါတယ် အဲ့တာကြောင့် ခွင့် တရက် ယူထားပါတယ် ဒီနေ့လဲ ခွင့်ဆက်ယူရမလားတွေးနေပါတယ်
မနေ့ကလဲ ခွင့်ယူပြီးတော့ တနေ့လုံးလိုလို အိပ်နေပါတယ် ညနေဘက်ကျမှနိူးပြီးတော့ အိမ်နားက ဈေးလေးနားမှာ တိုဟူးနွေးသွားစားပါတယ် ပြန်လာတော့ အရွက်လေးတွေ တွေ့လို့ နည်းနည်း ဝယ်လာပြီး လူနာစာ လူမမာစာ ဆန်ပြုတ် ချက်စားဖို့ ကြံပါတယ် မောင်က မကြိုက်တဲ့ အတွက် သိပ် မချက်စားဖြစ်တဲ့ ဆန်ပြုတ်ပါ တီကတော့ ကြိုက်ပါတယ် ရန်ကုန်မှာနေတုံးကဆိုရင် အမေရော ကိုယ်ရော ကြိုက်ကြတဲ့ အတွက် ခဏခဏ ချက်စားဖြစ်ကြပါတယ် ချက်ရတာ လွယ်သလို စားလို့လဲကောင်း စားရတာလဲ လွယ် တအိုးချက်ထားပြီးတနေ့လုံး နည်းနည်း နည်းနည်း စားလို့ရတဲ့ အတွက် ခဏခဏ အပျင်းသားအမိ နှစ်ယောက် ချက်စားဖြစ်ကြပါတယ် နည်းလမ်းလဲ မျိုးစုံ ချက်လို့ ရတာကိုးနော် အရက်ကလဲ တီ ချက်ပြီး တင်ဖူးပါတယ် ပဲသီးဆန်ပြုတ်က ဒီမှာပါ ခုကတော့ မုန်ညှင်းဖြူနဲ့ မုန်ညှင်းစိမ်း ဆန်ပြုတ်ပါ ချက်နည်း ပြုတ်နည်းကလဲ ဆင်ပါတယ်
ပထမဆုံး အသားတောက်တောက်စင်းထားတာလေး ကို ပြင်ထားပါမယ် ဘေးမှာက ဆန် ဘူးသေး တလုံးခွဲကို ရေ နည်းနည်း နဲ့ တည်ထားပါ နောက် အကြော်အိုးနဲ့ ဆီနည်းနည်းထည့် ပြီး ခုန က ဝက်သား တောက်တောက်စင်း ကို ကြော်ပါမယ် အောက်ကပုံမှာ ကြည့်ပါ။ ကြော်တဲ့ အချိန်မှာ ပဲငံပြာရည် အကြည် နည်းနည်း နဲ့ ဆား အချိုမှုန့် သင့်ရုံထည့်ပါမယ်။ ပြီးရင် ဘေးကို ခဏ ဖယ်ထားလို့ရပါတယ်။
ဘေးမှာက လှီးချွတ်ထားတဲ့ မုန်ညှင်းဖြူ စိမ်းတွေပါ ရေစင်စင်ဆေးပြီးတော့ စစ်ထားပါမယ် နောက် ခုနက တည်ထားတဲ့ ဆန်တွေ နည်းနည်း ဆူးစပြုလာပြီဆိုရင် ခုန က ကြော်ထားတဲ့ ဝက်သား ရယ် အရွက်တွေ ရယ် ကို ရောထည့်လိုက်ပါ ပြီးတော့ ဆား အချိုမှုန့် လိုသလောက်ထည့် ငရုတ်ကောင်း မှုန့် များများလေး ထည့်ပြီးတော့ ရေ ကို လိုရင် နည်းနည် ထပ်ထည့် ချိန်ဆ ပြီးရင် မီးသေးနဲ့ ကြာကြာလေးတည်ထားမယ် ဆိုရင် လွယ်ကူသက်သာ မြန်ဆန်အရသာရှိတဲ့ ဝက်သားမုန်ညှင်း ဆန်ပြုတ် တအိုးရပါပြီ
ပြီးရင်တော့ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ပန်းကန်လေးထဲ ကြိုက်သလောက် ထည့်စားရုံပါပဲ ကြိုက်တတ်ရင် ငရုတ်သီး ဆီချက် ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် နဲ့ သံပရာသီးလေး ညစ်စားရင်လဲ သိပ်သိပ်ကောင်းပါတယ် ခုလောလောဆယ်တော့ တီက လည်ချောင်းကလဲနာ ချောင်းကလဲ ဆိုးနေသေးတဲ့ အတွက် ရိုးရိုးသားသား ဆန်ပြုတ်ဖြူဖြူလေးပဲ စားလိုက်ရပါတယ်လို့ ……………………
ဒါလေးကတော့ စားပြီးသောက်ပြီး အဖန်တည်းတာပေါ့ တီရယ် မောင်ရယ် သားရယ်ပါ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ရုပ်ရှင် ကြည့်နေရင်း ရုပ်ရှင်ထဲမှာ သောက်တာတွေ့လို့ သောက်ချင်လာတာနဲ့ အသင့် အေးထားတဲ့ ပုလင်း ဖွင့် လိုက်ကြတာာ များများ မသောက်ပါဘူး စားကောင်း သောက်ကောင်း အိပ်ကောင်း ရုံပါပဲ ဝိုင်အနီက တနေ့ ကို တဖန်ခွက် နည်းလဲမနည်း များလဲမများပဲ သောက်ရင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် သိပ်အကျိုးရှိပါတယ်တဲ့ နှလုံးရောဂါ တို့ ဘာတို့လဲမဖြစ်ဘူးဆိုပဲ အဲ့တာကြောင့် သောက်တာပါ သောက်ချင်လို့တော့ မဟုတ်…………
Posted on January 11, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆန်ပြုတ်, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း2 Comments on လူနာစာ
တီချမ်း ပျင်းနေတယ် (ပဲသီး ဆန်ပြုတ်)
အရမ်း အရမ်း အရမ်း ပျင်းနေပါတယ်………..
ခွင့်ယူလိုက်ပြီလေ ဒီလက ၆ ရက်နေ့ကို အစိုးရက ပိတ်ပါတယ် ဘာနေ့လဲတော့ မသိ စိတ်မဝင်စား စိတ်ဝင်စားတာ က ပိတ်ဖို့ ပဲ အဲ့တော့ ၅၊ ၇၊ ၈၊ ၉ ကို ခွင့်ယူလိုက်ပါတယ်။ နောက်အပတ်ကလဲ တပတ်လုံး သင်္ကြန်ပိတ်တော့ စုစုပေါင်း စနေ တနင်္ဂနွေတွေ အပါအဝင် စုစုပေါင်း ၁၇ရက်တိတိနားရပါမယ် ဝေး………………………………ပျင်းလိုက်တာ……………..ဒီနေ့ ပထမရက်ပါ ခုကတည်းက စပျင်းနေပါပြီ
အဲ့တာနဲ့ အရင်က စုထားတဲ့ ရေးစရာ ရိက္ခာ ကုန်ကြမ်းတွေကို ပြန်လှန်ရပါတယ် တွေ့ပါပြီ ဘာရေးရမလဲလို့
စကားမစပ် နန်းညီက ပြောပါတယ် “ဒီမယ် ဘာကိစ္စ စားစရာတွေချည်းရေးနေရတာလဲ”…..တဲ့
အင်းဘယ်လိုပြောရမလဲ ခုတလောတော့ အဲ့တာပဲ အာရုံလာနေပါတယ် ဒါက ၁ အချက်ပေါ့
နောက် ကို့ပရိသတ်တွေကလဲ ကို စားစရာအကြောင်းရေးရင် ပိုကြိုက်ကြသလားလို့ပါ
စိတ်ထင်တာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ် အင်းလေနော် ကို့ဘာသာ အရူးထပြီး အချစ်ဒဿန ဘာညာ လျောက်ရေးနေတာ ဘယ်သူက စိတ်ဝင်စားမှာလဲနော့ ဝတ္ထုကျတော့လဲ စထားပြီး မဆုံးနိုင်တာ က နှစ်ပုဒ်၊
ကဲ တခြားဟာကျတော့ကော ဘာများသေသေချာချာရေးနေတာရှိလို့လဲဆိုတော့ ဘာမှမရှိ။ ပြဇာတ် လိုလို ဘာလိုလို တခါရေးလိုက်ပါသေးတယ် တပုဒ်၊ ဟော ဆောင်းပါးလိုလိုဘာလိုလို ညာလိုလိုတွေကလဲ မဖြစ်သလောက်၊ သီးချင်း ဘာသာပြန်တွေတင်လိုတင်၊ ကဗျာ တွေဘာတွေ စပ်လိုစပ် အဲ့လိုဗြုတ်စဗျင်းတောင်း၊ အလေနတော၊ စည်းကမ်းမကျ၊ အာရုံနောက်လိုက် လျောက်ရေးတော့ လိုင်းမရှိဘူးလေနော့၊ ဒီကြားထဲမှာ ဟင်းတွေဘာတွေကလဲ ချက်သေးဆိုတော့ အဲ့လိုကို အောင်ကြူကြူ ဖြစ်နေတာပါ။ စိတ်၏စေစားရာ လိုက်နာနေသော မိုးမြင့်တိမ်ကိုတောင် သတိရသေး။ မင်းမြတ်သူရ လိုပြောရရင်တော့ ဘာကိုမှ ဆုပ်ကိုင်မထားပါဘူးပေါ့လေ (လက်ညောင်းမှာ စိုးလို့ အဲ့လောက်တောင် ပျင်းနေတာ
အဲ့တာနဲ့ မရှိရှိတာထဲက ပြန်ရှာတော့ အောက်ဖော်ပြပါပုံတွေတွေ့ပါတယ်………….
ကဲအဲ့တော့လဲ ချက်လိုက်အုံးမယ်လေနော့ ဒီတခါတော့ ဟင်းမဟုတ်ပါဘူး
ပျင်းနေပါတယ်လို့ဆို………..(ထက်ထက်၏ အိညှောင့်သံလေးနဲ့ ချစ်စဖွယ်ဖတ်ပါရန်။)
ဒါလေးတွေက အရင်တပတ် အိမ်နားက Century ပလာဇာ သွားတုံးက ဝယ်လာတာတွေပါ။ တီ့မှာ ဝါသနာ တခုရှိတယ် အမေ့ဆီက ပါလာတာ အဲ့တာ က ပုံးတွေ ပလုံးတွေ ဘူးတွေ ကို ကြိုက်တတ် ဝယ်တတ် စုတတ် ဆောင်းတတ် တာပါပဲ။ ကြည့်လော့ အဆွေ…………..အောက်မှာ ဝယ်လာတာတွေမနည်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဈေးမကြီးပါဘူး တခုမှ ၂၀ ဘတ်ပါပဲ။ ကြိုက်တာယူ ၂၀ ပါ………….အဲ့တာနဲ့ တီလဲ စိတ်ကူးပေါက်ပေါက်နဲ့ အမျိုး ၄၀ ကျော်လောက်ဝယ်လာလိုကတယ် အေးရော…..
စုံစိနေတာပါပဲ ဘူးတွေ ပလုံးတွေပါတယ်။ တစ်ရှူးလဲပါတယ် အိမ်ကို ဧည့်သည် အလာများတဲ့အတွက် သူတို့ လာရင် အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် သွားတိုက်တံလေးတွေက အစဝယ်ထားတယ် နောက် အိမ်သာထဲထည့်တဲ့ အနံ့တုံးလေးတွေ ခေါက်ဆွဲချက်စားရင် ရေဖျော်ပြီး စယ်တဲ့ဇကာ၊ အများဆုံးကတော့ ဘူးပါပဲ….ပုလင်းသေးသေးလေးတွေလဲပါသေးတယ်၊ နောက် ဘူးသေးသေးလေးတွေ ကို ဆေးထည့်ဖို့ အဲ့တာကတော့ တီ့ ပေါ့စတစ် သူငယ်ချင်းတွေကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ ပါ။ အဲ့လို ဘုစုခရူတွေဝယ်ရတာလဲ ဝါသနာပါပါတယ် နောက်မှ သုံးတာ မသုံးတာက တကဏ္ဍပေါ့လေ
အင်း အဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လဲတွေးမိပါသေးတယ် ………..
ဘန်ကောက်မှာနေရတာ အဲ့ဒီပြဿနာက သိပ်ကြီးတယ် (မမကွမ်လေသံပါ) ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပစ္စည်းတွေ အားလုံးက ဝယ်ချင်စရာချည်းပဲ ပြီးတော့ ဈေးတွေကလဲ တချိန်လုံးဆိုမှ တချိန်လုံး လျော့နေတာ တနှစ်ပတ်လုံးပဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ လျော့တယ် နှစ်လယ်လျော့ဈေး တရုတ်နှစ်ကူး ခရစ်စမတ်စ် နယူးရီးယား သဖြင့်ပေါ့လေ အဲ့တော့ အရမ်းကို တမ်းတင်း(tempting) ဖြစ်ပါတယ် အဲ့လိုနဲ့ပဲ လိုတာလဲဝယ် မလိုတာလဲဝယ်နဲ့ လူက အကြွေးနဲ့ချည်း ချာလည်လိုက်နေပါတယ် အော် ဘဝဘဝဘဝ ဒီလိုအမြဲ ဒီလိုပဲပေါ့ နော်..
အဲ့နေ့ကပဲ အခွေတွေဝယ်ခဲ့ပါသေးတယ် အခွေကတော့ ဘာဝယ်သလဲမမေးနဲ့ ကြုံလို့ နည်းနည်းကြွားပါအုံးမယ် တီက ပိုက်ဆံစရှာတတ်တဲ့ အရွယ်ကတည်းက ရသမျှ ပိုက်ဆံတွေက အခွေရယ် စာအုပ်ရယ်နဲ့ကုန်တာများပါတယ်။ အခွေဆိုတဲ့နေရာမှာ အရင် ကက်ဆက်တိပ်တွေကနေ နောက်တော့ စီဒီ အိမ်ပီ သရီးခွေ အကုန် ဝယ်သလို ရုပ်ရှင်ဆိုလဲ အရင် တိတ်ခွေကြီးတွေကနေ နောက်တော့ VCD DVD ခုဆို Blue ray ထိ အကုန်ဝယ်ပါတယ်။ စာအုပ်ကတော့ ပြောမနေနဲ့တော့….ဒီမှာ ကြည့်ပါ ကြုံတုံး ဒါတွေက ဒီရောက်မှ ဝယ်ဖြစ်တဲ့ DVD တွေပါ ရန်ကုန်မှာ ကျန်ခဲ့တာတွေ တပုံကြီး ရှိပါသေးတယ် ရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီနေပါပြီ မြန်မာပြည်မှာနေတုံးက စနေ တနင်္ဂနွေဆို ရင် အမြဲ အခွေနဲ့ စာအုပ်အဝယ်ထွက်တဲ့နေ့တွေပါ ခုနောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်ပြန်ရင်လဲ တခါတခါ ပြေးပြေးဝယ်ရပါသေးတယ် အဲ့တာတွေအတွက်က သပ်သပ် ၂ ရက် ၃ ရက် အချိန်ပေးရပါတယ် တခါတခါ နန်းညီတောင် ကန့်လန့်ကန့်လန့်ပါသေး………….း=) ရှူလော့ ချစ်ဆွေ
ကဲပါ ထားတော့ အကြွားချပ် နောက်ကြုံမှ စာအုပ်တွေကို ထပ်ကြွားမယ် ခုတော့ အစက စကား ကိုပြန်ကောက်မယ် အဲ့နေ့ကလဲ အခွေတွေဝယ်လာပါသေးတယ် အများစုကတော့ တရုတ်သီးချင်းတွေပါ နောက် ယိုးဒယား အဆိုတော် အမေရိကန်မှာ ကြီးတဲ့ ထားထားရန်း tata young အခွေ နှစ်ခွေပါတယ်(စကားမစပ် စီးတီး အက်ဖ် အမ်က လူတွေလေ ဗီဂျေ တွေပေါ့ တာတာရမ်း တာတာရမ်း နဲ့ခေါ်ပါတယ် အရမ်း အမြင်ကပ်ပါတယ် ဝေလုကျော်ကို ဝေဠုကြော် လို့ ခေါ်ပြီး ဒွေး ကို ဓွေး လို့ခေါ်နေသလို ခံစားရပါတယ် သြောင်QQ နဲ့လို့ မြင်ပါတယ် သတိထားသင့်ပါတယ် ကျားပေါက်ကလဲ မာရိုင်ယာ ခယ်ရီ ရဲ့ အီး အီးကွဲတူ အမ်စီ စကွဲ ကို အီးအီးကွဲတူ အမ်စီ တူး လို့ပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အက်ဖ်အမ် က ကိုကိုမမတွေကို တခါပြောပြီးပါပြီ သူ့စာအုပ်ထဲမှာပါ ရှာဖတ်ကြပါ မဆိုးပါဘူး သူ့အရေးအသားက စိုးင်စိုင်းထက်ကောင်းတယ်လို့ တီမြင်ပါတယ် (တီ့တို့လို ကို့ဘလောခ် ကိုရေးပြီး ဖတ်တဲ့ လူ အနည်းငယ်ဆို ဘာပြောစရာလိုမလဲနော် ခုဟာက မြန်မာ တနိုင်ငံလုံးကို လွှင့်နေတဲ့ အက်ဖ်အမ်လေ အမှားနည်းအောင် ဆင်ခြင်ကြဖို့ကောင်းတယ်နော် ရှိသေးတယ် ရှနိုင်းယား တွင်း ကိုလဲ ရှူနိုင်ယာ တွန်း လို့ ပြောပြောနေတဲ့ ကိစ္စ ပြောရင်တော့ ကုန်ဖွယ်မရှိပါ) ကဲထားတော့ အခွေဝယ်တဲ့ ကိစ္စဆက်မယ် အဲ့နေ့က ဒိုင်ဒို ရဲ့ တတိယ အယ်လ်ဘမ်ပါတယ် နောက် ရုပ်ရှင်ခွေ နှစ်ခွေ “ကို့ရဲ့ ဘလူးဘယ်ရီ ည” နဲ့ “စာဖတ်သူ” ဟိဟိ အမှန်က “ကို့ရဲ့ ဘလူးဘယ်ရီည” က ရှိပြီးသား မြန်မာပြည်မှာ ကျန်နေခဲ့တာ အရမ်းကြည့်ချင်လာလို့ ထပ်ဝယ်လိုက်တယ် အေးရော…..နောက်တပုံပေါ့ ကဲကြည့်ရအောင် ဘာတွေလဲလို့နော် …………..ကြည့်…
ညဘက်ကျတော့ ထမင်း နှစ်လုံးချက်ပြီး (ဟုတ်ကဲ့ တယောက်တည်းကို နှစ်လုံးပါ နိူ့ဆီဘူး မဟုတ်ဘူးလေ ဟို ထမင်းအိုးတွေ ဝယ်ရင် တခါတည်းပါလာတဲ့ ကော်ဘူး နှစ်လုံးပြောတာ) ပြီးတော့ ပြောထားသေးတယ်လေ အပျင်းကြီးပါတယ်လို့ ထပ်မချက်ရအောင်ပေါ့ ငှဲငှဲ…နောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်းအိမ်မှာ အသင့် ရှိတဲ့ အကြော်အလှော်တွေနဲ့စားရပါတယ် ပျင်းထှာကွယ်… ဘာတွေလဲကြည့်ရအောင် ပထမဆုံးက ငါးဖယ်ကြော် အရင်တနေ့ တီမုန့်ကနေ ကျန်နေသေးတာ၊ တယောက်ထဲနေရတာ အဲ့တာတွေတော့ စိတ်ညစ်ရတယ် ဟင်းကျန်တွေလေ ဟင်းကျန်တွေ ပစ်လို့ကလဲမဖြစ်ဘူးတော်ကြာ တီချမ်းဆိုတဲ့ အတူနေ ပစိပစပ်မက လာအုံးမယ် နင်ဒီလို စားသောက်နေရတဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူ ဘယ်သန်း ငတ်နေလဲသိလား ဘာညာ သူ့ပါးစပ်နဲ့မဆန့် ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီး လူကို လာပြောအုံးမယ် အမြင်ကပ်တယ် ဟွန့် အဲ့တာနဲ့ အကျန်တွေလဲ စားစားနေရပါတယ် လို့..အိုကေ ငါးဖယ်ဘေးက (ပုံကို ကလောက်စ် ဝိုက် ကြည့်သွားနော်) ဆတ်သားခြောက်ကြော် တနေ့က တီနဲ့ “လင်တူမယားညီအမ တော်တဲ့ မဝေ” ပို့လိုက်တာ ရန်ကုန်က (ဟိဟိဟိ နော် ဦးညီနော်) ပြီးတော့ ဘေးက ချဉ်ပေါင်ကြော် နောက် သူ့ဘေးက ဇွန်း အဲလေ…ပြောစရာလားနော် အိုင်ကျူမြင့်စာဖတ်သူကို စော်ကားတာ တီချမ်းနယ် ဇွန်းမှန်းတော့ လူတိုင်းသိတာပေါ့ အံမယ် အဲ့တာ ရိုးရိုး ဇွန်းမဟုတ်ဘူးဟဲ့ ကိုရီးယား ဇွန်း အရိုး ပိုရှည်တယ် ကဲ တွေ့လားသူများသားသမီးတွေ များအဲ့လို မကြုံကြုံအောင် ကြွားတတ်တာ မိသစ်(ပန်းစကား) ကျနေတာပဲ ပြီးတော့မှ ဝက်သားခြောက်စပ်ကြော် (အသေကောင်းပါတယ် ကြက်သွန်ဖြူနီ မွမွလေးတွေနဲ့ ငရုတ်သီးနဲ့ ရှယ်ကြော်ထားတာ) ဒါကတော့ ချစ်ကိုကြီး ပဲခူးရိုးမ ဝက်ဝံဆီကပါ အဲ့တာလေးတွေနဲ့ ညစာကို ဖြစ်သလို ရုပ်ရှင်တဘက်နဲ့ တွယ်လိုက်ရပါတယ် အခြောက်တွေချည်းပဲမို့ (ဟင်းကိုပြောနေတာပါ တီချမ်းနဲ့ ဘာမှမဆိုင်)ဘေးကနေ ရေနွေးကြမ်းနဲ့မျောချရပါတယ် ကြုံလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ လက်ဖက်ခြောက်ကလဲ တရုတ်ပြည်နယ် စီချွမ်းဒေသ ကမ္ဘာ အကောင်းဆုံးနံပါတ် တစ် လက်ဖက်ခြောက် နဲ့ခတ်ထားတဲ့ မဟာ ဂန္တဝင် ရေနွေကြမ်းပါ (ပန်ဒိုရာ ရဲ့ ၂၀၀၈ ဧပရယ် ဖူးလ် ပိုစ့်ကို သွားဖတ်ပြီး ခပ်တည်တည် နဲ့ လိမ်ကြည့်ပါတယ် ရမလားလို့) ဟုတ်သော်ရှိမဟုတ်သော်ရှိပေါ့နော့ တယောက်ယုံလဲနည်းလားနော့ အလကားနေရင်း အထင်ကြီးခံရတာ နည်းတဲ့ ဘုန်းတန်းခိုးလားလေ ယောက်ျားတွေက ဘုန်းတန်းခိုး ပိုကြီးတယ်လို့ မှတ်ထင်တွေးယူ တတ်သူတွေ သတိချပ်သင့်ပါတယ်နော့ စကားတွေ ကြွားပြောတတ်ရင်လဲ မသိတဲ့လူတွေက အထင်ကြီးတတ်တယ်လို့ အဲ့တော့ ယောက်ျား=သောက်ကြွား အဲ အဲ နိုင်ငံရေးတွေပါကုန်ပြီ………zippppped
ဒါကတော့ ထမင်းနဲ့ မျောချရတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါ…“စာဖတ်သူ” တဲ့ အရင်က တခါကြည့်သေးတယ် ပျင်းစရာအရမ်းကောင်းလို့ ဆက်မကြည့်ဖြစ်ဘူး ဒီတခါတော့ သေချာကြည့်ဖြစ်တယ် တခါတခါ အဲ့လိုပဲ ရုပ်ရှင်တောင်အာရုံလာမှ ကြည့်လို့ကောင်းတာ ပြီးတော့ တိုက်ဆိုင်မှုရှိမှ ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့တခါက စာဖတ်ပြီး ပို့ပေးဖူးတဲ့ ကောင်လေး ကိုတောင် သတိရမိသေးတယ် (သူကတော့ စာတတ်ပါတယ် တမင်ဖတ်ပြတာ နားထောင်ချင်တယ်ဆိ်ုလို့ မနော်ရဲ့ တစုံတယောက်ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကိုဖတ်တာပါ ဂျူးရဲ့ မြရဲ့လ ကော ရေမျောသီး ကောမဟုတ်ပါဘူး ဟေမာနေဝင်းနဲ့ ထူးအိမ်သင်ဖတ်တာ အရင် ကက်ဆက်ခေတ်တုံးက နားထောင်ဖူးတယ် )
ထားပါ ရုပ်ရှင်လေးကောင်းတယ် ကြုံရင်ကြည့်လိုက် အေးတော့အေးတယ် ကိတ်ဝင်းစလက် (ကိတ်မုန့်နဲ့ မုန့်ပစ်စလက်ကိုပြေးမြင်ပါတယ်) သရုပ်ဆောင်တာ အင်မတန်ကောင်းဘဲ အဲ့တာကြောင့်လဲ ဆုတွေရတာ ရဖ်ဖင်းကတော့ အခန်း နည်းသလားလို့ သူ့ကို ကေါန်းစတန့် ဂါဒင်နာ မှာ ရေချယ်နဲ့ သရုပ်ဆောင်တာ ပိုကြိုက်တယ် အင်းဂလစ်ရှ် ပေးရှန့်ကတော့ အခွေရှိတယ် မကြည့်ရသေးဘူး
ပြီးတော့ ညလယ်ကျတော့ ထုံးစံအတိုင်း ထမင်းဆာလာပြန်ပါတယ် ထမင်းကြီးကျတော့လဲ ထပ်မစားချင် တာနဲ့ ရေခဲသေတ္တာကိုကြည့်လိုက်တော့ ဝက်သား တောက်တောက်စင်းတွေတွေ့တာနဲ့ ဆန်ပြုတ်ချက်ဖို့ အကြံပေါ်ပါတယ် မအ်ိပ်ရသေးတော့ “တရေးနိူးသော် အကြံပေါ် ပေါ်သည့်အကြံ ထပ်အိပ်ရန်” မဟုတ်ပါဘူး “စားပြီး ပြန်သော် အကြံပေါ် ပေါ်သည့်အကြံ ထပ်စားရန်” ဆိုပါတော့ ခွိခွိခွိ ဒီလိုနော် ကိုမှမဝရင် ဘယ်သူမှမဝတော့ဘူး
ပုံ ၁) ဝက်သားတောက်တောက်စင်းတွေပါ နောက်ဘေးက ပုံ ၂) ပဲတောင်းရှည်သီး အနေတော်လေးတွေဖြတ်လိုက်ပါ ပုံ ၃) ဘေးကတော့ ခုနက ကျန်တဲ့ထမင်း ပူပေါ့ ထမင်းကြမ်းမဟုတ်ပါ မဆီမဆိုင် ထမင်းကြမ်းလို့ရေးမိတာနဲ့ ငယ်ဘဝက အစားအသောက် နှစ်မျိုးကို သတိရပါတယ် ကဲ (ဓါတ်ရှင်များတွင်တော့ ယခု စာကို အဖြူအမည်း နှင့် မြင်ရပေမည်ပေါ့ နောက်ကြောင်းပြန်လေနော့ ဟဲဟဲ တီချမ်း ပေါရဲစွာပေါသည် အကယ်ဒမီမှန်း ပြီးပေါတာနော် ငှဲငှဲငှဲ )
၁) ငယ်ငယ်က မနက်ဆိုရင်တခါတလေ စားရတဲ့ ထမင်းကြမ်း+ ပဲပြုတ်ပူပူ+ ပဲဆီ စစ်စစ် = ရှလွတ် ရှလွတ် အင်မတန် အရသာရှိနဲ့
၂) ထမင်းကြမ်း+ မုန့်ဟင်းခါး+ ငရုတ်သီးများများ= ရှူးရှဲ အရသာရှိပါ အော် ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ ငါ့ရဲ့ ငယ်ဘဝနော်
ကဲရေးရင်းနဲ့ သွားရည်ကျရပြန်ပါတယ် ထားတော့ ဆက်မယ်…….
အိုးထဲကို ဆီထည့်ပါ ပြီးတော့ မီးဖွင့်ပါ ဟိဟိ ဆီပူလာတော့ ဝက်သား တောက်တောက်စဉ်းကို ထည့် ကြက်ဥ ၃ လုံးလောက် ခေါက်ထည့် ပုံ ၄ နဲ့ ၅ ကိုရှူ
ဝက်သားနဲ့ ကြက်ဥ ကို အနည်းငယ်မွှေကြော်လိုက်ပါ ပြီးတော့ ပဲသီးထည့် ဆက်ကြော်ပေး နောက်တော့ ပဲသီး ကျက်ပြီဆိုရင် ထမင်းပူ၊ ကြမ်း ထည့်လိုက် ပုံ ၆ ၇ ၈ အစဉ်လိုက်နော်
ပြီးရင် ထမင်းကို နည်းနည်းခြေလိုက်ပြီးတာနဲ့ ရေထည့် ငရုတ်ကောင်းမှုန့် ပါ ကြိုက်ရင်ထည့် ဆား ဟင်းချိုမှုန့် ထည့် ပြီးတာနဲ့ ဆူအောင် တည်လိုက်ပါ ပုံ ၉ ၁၀ ၁၁ နော်
ဆူလာရင်တော့ မီးအေးအေးနဲ့ တခါ ခဏ တည်ထားပေးပါမယ် ပြီးတော့ အောက် က အိုးကပ်ပြီး မတူးသွားအောင် နည်းနည်းတော့ မွှေပေးနေပေါ့အေ ပြီးရင်တော့ အောက်က ပုံ ၁၂ လို ပန်းကန်ထဲထည့်လိုက်ရင် ဝက်သား ပဲသီး ကြက်ဥ ဆန်ပြုတ် အရသာ ရှိရှိ တခွက် ကိုရပြီပေါ့
ဆန်ပြုတ်မကြိုက်သူများ အတွက်တော့ တယ် ကောင်းမယ်မထင် ကြိုက်ရင်တော့ အသေကောင်းပဲ
၇၅ ပွဲလောက် စားချင်သွားမယ် နောက် မှိုတွေ ဘဲဥ ကြော်တွေ နဲ့ တရုတ်ဆန်ပြုတ် ပြုတ်နည်းတွေရှိပါသေးတယ် အမဲသား ဂျင်း ဆန်ပြုတ်လဲ ကောင်းတယ် ကြုံရင် တင်ပေးတာပေါ့နော့
အောက် က ၃ ပုံက တော့ ရိုး ရိုး ကြည့်ရင် ဆန်ပြုတ်စားပြီး အချိုတည်းတာပေါ့
တရားသဘောနဲ့ကြည့်ရင်တော့ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တပါ
အဲ နောက်အမြင်တမျိုးနဲ့ကြည့်ရင်တော့ အတိတ် ပစ္စုပ္ပန် နဲ့ အနာဂတ် ပေါ့လေ ငှဲငှဲ မြင်တတ် တွေးတတ်ဖို့ပဲလိုတာ ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်တယ်လေနော့ စိတ်ကူး ဆို တာာ ပိုက်ဆံမပေးရပါ။
ကဲကဲ ဒီလောက်ပဲ တော်သေးပြီ
ဒီပို့စ် ကို ၃ ရက်နေ့ စနေ က စရေးတာပါ ခု ၅ ရက်နေ့ တနင်္လာမှ ပြီးပါတယ် ပျင်းနေပါတယ်လို့ဆို ….ဟွန့်
Posted on March 31, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆန်ပြုတ်, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း9 Comments on တီချမ်း ပျင်းနေတယ် (ပဲသီး ဆန်ပြုတ်)